Mikel Arteta oo si kulul u weeraray garsooraha kaddib guuldarradii Tottenham – Gool FM
(London) 13 Maajo 2022. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa weerar ba’an ku qaaday garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii xalay ay guuldarrada kala kulmeen Tottenham.
Tottenham Hotspur ayaa guul ka gaartay 10 xiddig oo kooxda Arsenal ah, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Premier League.
BBC Sport ayaa laga soo xigtay hadaladda tababare Mikel Arteta, kaddib wareysi uu bixiyay ciyaarta kaddib, wuxuuna yiri:
“Waxaan rabaa in garsooraha uu sharaxo go’aanadiisa naga dhanka ah.”
“Haddii aan sheego waxa aan ku fikirayo, waxay ila tahay in la i ganaaxi doono muddo 6 bilood ah, ma garanayo sida been loo sheego, sidaas darteed waxaan doorbidayaa inaan sheego waxa aan ku fikirayo, mana ka hadli karo.”
“Waan ku faanayaa ciyaartoydeyda, waxaana rabaa in garsooraha uu hor yimaado kaamirada si uu u sharaxo go’aanadiisa, waa wax laga xumaado in ciyaar qurux badan oo sidan oo kale ah la burburiyo manta.”
“Go’aanka waa la gaaray, mana bedeli karno arrinta, waxaa noo harsan laba kulan, gacanteena ayay ku jirtaa arrinta, waana inaan qabanaa shaqadeena.”
Si kastaba ha noqotee, Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka Premier League uga jirto kaalinta afaraad, waxana ay leedahay 66-dhibcood, hal dhibic ayeey ka sarreysaa kooxda kaalinta shanaad ee Tottenham, waxayna labada kooxood heystaan min laba kulan ay ku go’aamin karaan u soo bixitaankooda Champions League-ga xilli ciyaareedka soo socda.
Real Madrid oo NUS DARSAN goolal ah ku xaaqday Levante… (Vinícius oo saddexleey ka kacay)
Lewandowski oo ku wargeliyay Bayern Munich go'aanka ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa